SAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada oo Maanta xukun riday. |
SAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada oo Maanta xukun riday.
January 12, 2019	489 Views
Muqdisho–Maxkamada Ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa ay xukun ku riday askari lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Kumbud) ,kaasi oo loo heysto in uu dil u geystay Marxuum Dayax Iimaan Xasan 21-ka bishii sagaalaad 2018, waxaa uuna dilkaasi ka dhacay aga-gaarka Seybiyaano degmada Hodan ee Gobalka Banaadir.
Marxuum Dayax Iimaan Xasan ayaa ahaa wiil dhallinyara ah.
Dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Ciidamada Qalabka Side ayaa sheegay in eedeysanaha uu u adeegsaday qori Dhashiika ah meel ciriiri badan ka jiro balse qoriga loogu tala galay furumaha dagaalka.
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta go’aan ka gaaray, waxaana lagu xukumay eedeysane Ex, Laba xidigle xoogga dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Kumbud) dil toogasha ah oo ah qisaastii Marxuum Dayax Iimaan Xasan.
Maxkamadda Ciidamada ayaa horay digniin waxaa ay u dirtay askarta ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Maxkamada ciidamada ayaa waxaa ay xukuno ku ridaa askarta ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab.